Waraysi Cajiib ah Ka hor inta aanay dhiman Ragii weeraray Paris -Waraysigi Daawo - iftineducation.com
iftineducation.com – Kawashi: Anagu waxan nahay kuwa difaacaya Rasuulka Scw,anigu waa Kawaashi,waxaa isoo direy Ururka Al-Qaacida ee dalka Yaman.
Wariyaha: haye haye
Kawashi:halkaas ayaan u safrey,Shiikh Anwar Al-Cowlaqi ayaana I maal geliyey.
Wariyaha:haye imisa ayaa laga joogaa Waqtigaas?
Kawashi: muda dheer ayaa laga joogaa inta aan la dilin (wuxuu ula jeedaa Sheykh Anwar).
Wariyaha: marka Faransiiska waxad kusoo laabatey waqti dhow?
Kawashi: maya mudo dheer ayaan joogaa,intaas waxan sii baranayey qorsheynta arinkan.
Wariyaha: hadda kaligiina miyad tihiin,adiga iyo walaalkaada,mise waxaa jira Shakhsi kale?
Kawashi: arinkaas adiga kuma quseeyo.
Wariyaha:ma waxaa idin ka go’an inaad mar kale magaca Allah ku dishan dad kale ama Maya?
Kawashi: Yaan dileynaa?
Wariyaha: ma garanayo,waa su’aal adiga aan ku weydiiyey.
Kawashi: ma anagaa dilney dad Shacab ah oo aan waxba galabsan?
Wariyaha: waxad disheen Saxafiyiin.
Kawashi: ma waxan dilney dad aan waxba noo dhibin, nakala wad,nabad geliyo,Nabad geliyo.
Wariyaha: sug,sug Shariifow Sug, qof ma disheen Subaxan?
Kawashi: anagu ma nihin dilaayaal,anagu ma nihin dilaayaal, anagu waxan difaaceynaa Rasuulka Scw, anagu ma dilno Caruurta,anagu ma dilno Dumarka, anagu idinka oo kale ma nihin, idinka ayaa dumarka iyo Caruurta ku dilay Ciraaq,Suuriya iyo Afgaanistaan,anaga dhaqankeena kamid ma ahan taas, anagu waxan heysanaa Miithaaq Sharaf,Miithaaq sharafkeenuna Waa Islaamka.
Wariyaha: hadda waad aargoosateen si kastaba?
Kawashi: haa haa waan aargoosanay,adiga ayaaba sidas yiri , waan aargoosanay,waan aargoosanay.
Maalintii Shalay gelinkii dambe waxaa suuq ku yaala magaalada Paris isna galey nin Muslim ah,laguna magacaabo Xamdi Kulibaati,wuxuuna gacanta ku dhigey Tobanaan qof,mar dambe ayuuna lasoo xiriirey TV ku yaala Faransiiska,Wareysigan ayuuna bixiyey.
Wariyaha: maxad halkaas ugu sugantahay?
Kolibaati: waxan halkaas ugu suganahay,sababtoo ah dowladda Faransiiska waxay Weerareysaa dowladda Islaamiga ee Khilaafada.
Wariyaha: masoo qaadatey wax un Talo ah ama waxbarasho?
Wariyaha: mala xiriirtey labada Wiil ee walaalaha ah?
Kolibaati: haa,si wada jir ah ayaan u qorsheynay Camaliyadan iyo fulinteeda,iyagu waxay qaateeen Weerarka Charlio Hebdo,aniguna waxan qaatey Booliska.
Wariyaha: wali Cilaaqo ayaa idin ka dhaxeysa iyaga?, mar dhow Teleefanka ma kula xiriirtey?
Wariyaha: Xaaskaada ayaa kula jirta sow ma ahan?
Kolibaati: maya kaligey baan ahay, Xaaskeyga halkan ma joogto.
Wariyaha: Suuqa dadka ku jira imisa ruux ayay gaarayaan?
Kolibaati: waxaa jira 4 ruux oo dhimasho ah,iyo 16 Shakhsi waxaana la jira hal canug,tira guudna waa 17 (wuxuu la hadlaa mid kamid ah dadka),wuxu leeyahay waxaa jooga halkan 8 Dumar.
Wariyaha: maxad dooneysaa adiga?
Kolibaati: waxan codsanayaa in Ciidanka oo dhan lasoo saaro ee dagaalka kula jira dowladda Islaamiga ah,iyo meel kasta oo ay kula dagaalamayaan Muslimiinta,anigu wadahadal ayaan diyaar u ahay,u sheeg ha ila soo xiriiraan.
Wariyaha: Kooxdee katirsan tahay adiga?
Kolibaati:Dowladda Islaamiga ah.
Wariyaha:adiga halkaas ma aadey? , (Wuxuu ula jeedaa Suuriya ama Ciraaq)
Kolibaati: arinkaas waan ka fogaaday,sababtoo ah waxa laga yaabaa in mashruuceyga oo uu waji gabax kurido aaditaankaas.
Wariyaha: ma jirtaa sababo aad u beegsatey Suuqa?
Kolibaati: haa waa Yahuudda,waxan u beegsaday sababtoo ah dhibka ay gaarsiiyeen Muslimiinta meel kasta oo ay joogaan,si gaar ah dowladda Islaamiga ah.
Wariyaha: marka lagu daro labada Walaal,majiraan rag kale oo Cilaaqo idin ka dhexeyso?
Kolibaati: maka jawaabayo Su’aashaas,intan way kugu filan yihiin,Booliiska gaarsii Nambarkeyga.
MUUQAAL AHAAN VIDEO DAAWO: